सबिन र म सँगै छौं तर बिहे भएको छैन - अनु शाह ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सबिन र म सँगै छौं तर बिहे भएको छैन – अनु शाह ?
अभिनेत्री अनु शाह अभिनयका कारण भन्दा पनि प्रेमका कारण बढी चर्चामा छन् ।उनको अभिनेता सविन श्रेष्ठसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चा छ । केही समय लुकिछिपी माया साटेको यो जोडीले पछिल्लो समय खुलेरै प्रेम व्यक्त गरिरहेको छ ।उनीहरु एकअर्काको परिवारसँग पनि नजिक भइसकेका छन् ।
२०७४ सालमा यो जोडीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । तर, उनीहरुले यसलाई गतल बताए । निषेधाज्ञाको समयमा अनुले आफ्नो सिउँदोमा सिन्दूर लगाएर टिकटक बनाएपछि उनले गुपचुप रुपमा सविनसँँग विवाह गरेको फेरि चर्चा चल्यो । तर, उनले आफूहरु सँगै भए पनि बिहे नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
अनु भन्छिन्- ‘हामी केही वर्षदेखि सँगै नै छौं तर विवाह भएको छैन । हाम्रो इन्गेजमेन्ट पनि भएको छैन । तर हामी कहिल्यै नछुटिउँ भनेर उहाँले ‘प्रमिस रिङ’ लगाइदिनुभएको छ ।’ आफूहरु तत्काल विवाहको योजनामा नभएको पनि उनले सुनाइन् । आफ्नो गर्धनमा सविनको नामको ट्याटु समेत खोपाएको बताएकी छन् ।
सविनसँगको पहिलो भेटबारे उनी भन्छिन्, ‘मैले उहाँलाई २०६८ सालमा चिनेको हो । होलीको फोटोसुटको क्रममा हामीबीच चिनजान भएको थियो । हामी सँगै भएको चाहिँ चार वर्ष जति भयो ।’ उनी सविनको सहयोगी भावना आफूलाई मनपर्ने बताउँछिन् ।
उनले आफूले कहिल्यै नम्बर वान हिरोइन बन्छु भनेर नसोचेको पनि बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले जीवनमा कहिल्यै नम्बर वान हिरोइन बन्छु भनेर सोचिनँ । राम्रो कलाकार बन्न हिँडेको हुँ।’जे होस् सबिन र अनुको प्रेमले राम्रै चर्चा पाएको थियो ।